बिचार – E-Ramechhap
माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं । सर्बप्रथम यहाँलाई शिक्षा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु । यहाँको कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठुलो बेथिति तथा असमानतालाई चिर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याई शिक्षामा छलाङ मार्न सफल रहोस भन्ने कामना गर्दछु । म रामेछाप जिल्ला, […]
विश्वव्यापी रुपमा जटिल समस्या बन्दै गएको आत्महत्याको रोकथाम तथा यसका बारेमा जनचेतना फैलाउने उदेश्यले प्रत्येक बर्ष १० सेम्टेम्बरका दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै आईएको छ । यस वर्ष ” Creating Hope through Action ” अर्थात ” कार्यको माध्यमबाट आशा जगाउ ” भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाईदै छ। कोरोनाको महामारी तथा लामो लकडाउन र […]
हिन्दु नारीहरुको लागि हरीतालिका तीज महान पर्व हो । हरीतालिका तीजलाई विश्भर छरिएर रहेका हिन्दु नारीहरुले हर्सोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । तीज विशेषतः हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतिमा समर्पित छ । पार्वति भगवान शिवकी पत्नि हुन् । पार्वर्तिले तिजको दिन निराहार, निराकार ब्रत बसेर आरध्यदेव भगवान् शिव प्राप्त गरेकी हुन् भन्ने विभिन्न शास्त्र तथा किम्बदन्तिहरुमा उल्लेख […]
म केही समय देखि रामेछापमा छु । पछिल्लो समयमा देश बिदेश घुमाई पछि सुरुवात गरेको ब्यवासाय । ब्यवासायीक पाछिको कोभिडले लथालिङ्ग पारेको आर्थिक अवस्थाले म मानसिक रोगी भैसकेको थिए । ठप्प बन्द । त्यो बन्द भित्र बैंकको किस्ता साथिभाइको चर्को ब्याज । म अन्योलमा थिए । मेरा उपाए कि ब्यवसाय छाडेर अन्तकतै कसैले नदेख्ने ठाउँ […]
जेष्ठ नागरिक द्वय देविप्रसाद भट्टराई र छविलाल भट्टराई भन्नु हुन्छ वि.सं. १९९० को महाभुकम्पपछि एउटा सानो धर्सो÷खोल्सीको रुपमा तिमी देखा परेका रहेछौ । दिन बित्दै जाँदा तिमीले आफ्नो रुप पनि परिवर्तन गर्दै गएछौ । वि.सं. २०११ सालमा पहिरोको रुप धारणा गरी वि.सं. २०४१ देखि २०४४ सम्म त झन विकराल पहिरोको रुप लिन पो पुगेछौ । […]
राष्ट्रको विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त गरिने अग्रगामी परिवर्तनलाई विशेषतः राजनीति भनिन्छ । राजनीति भनेको राज्यको मूल नीति हो । राज्य चलाउने साधन हो । कुनै पनि राज्यको आकार एवं संरचना राजनीतिले नै तय गर्ने गर्दछ । भनिन्छ कलिला बालबालिकामा देश भेटिन्छ । महिलाको अनुहारमा देश झल्किन्छ । वृद्ध भएका बुबा आमाका गालामा देशका सीमाना भेटिन्छ । […]
कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि हामीलाई आक्रान्त बनाउदै लगेकोछ । मानिसहरुमा डर , चिन्ता , भय , तनाव बढेर गएकोछ । विपतिको बेला सामान्य डर , चिन्ता , छट्पटी , तनाव हुनु स्वभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अबस्थामा मानिसले देखाउने स्वभाविक प्रतिक्रिया भनिन्छ । तर लामो समयसम्मको डर ,चिन्ता , भय, तनाव हुनु भने राम्रो […]
प्रधानमन्त्री ज्यू धरहरा त उठ्यो, नेपाली कहिले उठ्ने ?
विक्रम संवत् १८८२ सालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले आफ्नी महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झना स्वरुप धरहरा निर्माण गरेका थिए । भीमसेन थापाले निर्माण गरेकाले धरहरालाई भिमसेन स्तम्भ पनि भन्ने गरिन्छ ।धरहराको उचाइ त्यसवेला ९० हात थियो । १९९० साल माघ २ गतेको महाभुकम्पले क्षति पुर्याएको धरहरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले ९ तला कायम गरी पुनर्निर्माण गरेका […]
महासंघको नेतृत्वले अव नयाँ पुस्ताका पत्रकारलाई तिखार्नुपर्छ
आजको युग बिज्ञानको युग हो । बिश्वमा घटेका हरेक घट्नाको जानकारी र विवरण छिनभरमै बिश्वको सबै कुनामा पुग्छ । विश्वमा घटेका यस्ता घटनाहरुलाई सबैसामु पु¥याउन संचारको माध्यमबाट पत्रकारहरुले भुमिका खेलेका हुन्छन् । पत्रकारिता राज्यको महत्वपुर्ण अङ्ग हो । यसलाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा राखिएको छ । पत्रकारितालाई दुई धारको तरवार पनि भनिन्छ । नेपालमा पहिलो […]
यात्रा स्मरण : मानवीयता हराएको छैन
(बास्तविक घटनामा आधारित) दिन थियो २०७७ साल मंसिर १३ गते शनिवार । म क्याम्पसको कामको शिलसिलामा काठमाडौँ जानु पर्ने भएकाले विहान ६ः३० बजेतिरै रामेछापबाट मोटरसाइकलमा निक्लिएँ । विहानको चिसोमा विस्तारै–विस्तारै वी.पि.राजमार्ग र आपसको रमणीय दृष्य हेर्दै अगाडि बढी रहेँ । अत्याधुनिक विकासको एउटा नमूना वी.पि. राजमार्ग कतै सिधा त कतै नागवेली आकारको,यसको दृष्यवलोकन गरेर नरमाउने […]